Tartanka Jagada Madaxweynenimada ee Awdal State oo la Qanabayo – Rasaasa News
Tartanka Jagada Madaxweynenimada ee Awdal State oo la Qanabayo
Oct 26, 2011 Tartanka Jagada Madaxweynenimada ee Awdal State oo la Qanabayo
Copehagen, Oktober 26, 2011 [ras] – Tartanka jagada doorashada madaxweynenimada maamul gabaleedka Somaliyeed ee Awdal State oo in badan laga shin tirinayeye ayaa la filayaa in ay ka dhacdo London dhamaadka bishan Oktober ee aynu ku jiro. Waxaana si weyn isugu haya laba nin oo aan kala dhicin xaga da,ada, waayo aragnimada, aqoonta iyo jacaylka Somalinimada.
Awdal State waxaa uu ka mid yahay gabaldii hore loo odhan jiray waqooye galbeed Somaliya, waxaana uu ka mid yahay gabalada Somaliyeed ee ugu taariikhda faca weyn.Awdal State Wuxuu ka kooban yahay Saddex gabal oo waaweyn oo ay magaalo madax u tahay magaalada Borame.
Dadweynaha ku nool awdal State, waxay ka mid yihiin dadka Somaliyeed ee ay aadka ugu weyn tahay Somalinimadu [magaca somali uu ka yimid isimkooda], waxaana degan dadka ugu nabada jecel Somalida uguna tacliinta badan.
Nabad jacaylka dadka reer Awdal waxay keentay in ay in badan ka mid ahaadaan dalka ismagacaabay ee Somaliland iyaga oo ka dhur sugayey in maalin ay Somaliya dib cagaheeda isugu taagi doonto.
Xaqiiqdii dadweynaha reer awadal waxaa xiligan ku kalifay in ay samaystaan maamul gabaleed Somaliyeed “Awdal State” waa dhibaato ay in badan u dhabar adaygayeen oo kaga imanaysay maamulka beeleedka Somaliland.
Waxaana hore London loogu sameeyey magaca Awdal State, iyada oo loo bandhigay dadka reer Awdal in ay diyaar u yihiin iyo in kale maamul u gooni ah. Dadweynaha reer Awdal waxay 100% isku raaceen in ay samaystaan maamul gabaleed Somaliyeed oo u gooni ah oo lagu magacaabo Awdal State.
Sida aan ka soo xiganay xubno ka mid ah maamulka aan wali madaxweynaha yeelan ee Awdal State, in mudo la diyaarinayey hanaankii maamulka ee Awdal State. Waxaa uu afhayeenku noo sheegay in la dhamaystiray hanaankii dawladnimo iyo waliba shuruucdii lagu shaqayn lahaa, dhawaana ay dhacayso doorashada madaxweynenimo ee Awdal State.
Maamulka beeleedka Somaliland oo ku dhisan cadaadis, quudhsi, Somali diid iyo dhul boob ayaa ku hanjabay in ay xabsiyo waaweyn u samaysteen cid kasta oo dhibaato sheegata dadkana u sheega wax aan Somaliland ahayn. Hore ayaa dadweyne badan oo reer Awdal ah oo yidhi Somali baanu nahay loogu xidhay maamul beeleedka Somaliland.
Aqoon yahanka Somaliyeed Axmed Ismaaciil, oo ka soo jeeda gabalka Awdal oo ay hooyadii ku dhimatay waa dhaxdii ahayd magaalada Boorama ayuu maamul beeleedka Somaliland u diiday in ka qayb galo aaska hooyadii, sabab somaliweyn jacayl darteed.
Maamul gabaleedka Somaliland oo ah hal beel ah, ayaa xoog ku muquunisa beelaha Somaliyeed ee ay wada degaan. Waxayna u diideen in ay ka qayb qaataan ururada siyaasadeed sida xisbiyada iyo dhaqaalaha, waxaana maamulkaas uu leeyahay saddex urur siyaasi oo ay leeyihiin lafaha waaweyn ee isla beesha Somaliland.
Beesha Somaliland ayaa diidan in ay Somali ka mid ahaato, kaliya sabab cadaadis ay ka sheeganayso xukuumadii ugu dambaysay ee Somaliya. Waxayna hoos u eegin, iyada oo aan wali dawlad noqon cadaadiska iyo dhibaatada, dilka, quudhsiga iyo deegaan boobka ah ee ay ku hayso beelaha Somaliyeed ee ka tirada yar wadana degaan yihiin.
Waxaa hubaal ah in Awdal State uu wax badan ka badali doono siyaasada saldhigi wayday ee Somaliya, maadaama ay dadweynaha reer Awdal yihiin hooyada aqoonta Somaliyeed.
Doorashada maamul gabaleed Awdal State ayaa la sheegay in ay ka dhici doonto magaalada London ee dalka Ingriiska dhamaadka bishan Ocktober.
Labada nin ee u tartamaya jagada madaxweynenimada ayaa kala ah Kornayl Xasan Xuseen Riiraash iyo Dr. Maxamed Aadan Riiraash. Waa laba nin oo aan kala dhicin waayo aragnimada, aqoonta iyo jeclaanta Somalinimada.
One Killed, 13 Wounded in Nairobi Blast
Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia UDSE oo shir ku qabtay xarunta Gobolka California, San Diego